Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment नङ फुल्यो ? नयाँ कपडा लगाउन पाइन्छ भनेर मख्ख नपर्नुहोस् ! यस्ता छन् बैज्ञानिक कारण - Pnpkhabar.com
नङ फुल्यो ? नयाँ कपडा लगाउन पाइन्छ भनेर मख्ख नपर्नुहोस् ! यस्ता छन् बैज्ञानिक कारण
एजेन्सी : नङको माथिल्लो भागमा कहिलेकाँही सेतो देखिने गर्छ । नङ फुलेको अवस्थालाई लिएर विभिन्न अन्धविश्वासी धारणा पनि पाईन्छ । सेतो नङले नयाँ र राम्रो लुगा लगाउने संकेत मिल्ने परम्परागत धारण छ । तर नङ फुल्नु स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो होइन । समस्या हो ।